Home » Featured » Ny axle ai dia manentana ny Campaign Funding SeedInvest
Ny axle ai dia manentana ny Campaign Funding SeedInvest
Boston based axle ai dia ao amin'ny vaovao indray. Ny orinasa mpisava lalana, izay manohy miresaka momba ny filàna maimaim-poana ho an'ireo fitaovana fikarohana sy fitantanana lahatsary ho an'ny ekipa madinika ho any amin'ny faritra afovoany, dia nanambara ny herinandro lasa teo, ny famoahana ny axe ai GearTM, rafitra iray mifamatotra ny fahefana compact vaovao Apple Mac mini miaraka amin'ny navigateur ahafantarana ny navigateur AI, AI-maoderina, workflow and software code transcode. Axle ai Gear dia manambatra ny karazan-auto-tagging amin'ny endriny ary mikaroka miaraka amin'ny workflow sy ny fitaovana maoderina natao ho an'ny mora ampiasaina sy ny fahazoana midadasika.
Ankehitriny, nanambara ny orinasa fa manomboka ny famatsiam-bola SeedInvest, sehatra fitaratry ny fitadiavam-bola. Ny tranonkala dia miaina androany www.seedinvest.com/axle.ai/seed. SeedInvest dia manome ny mpampiasa tsirairay manana fahafahana hahazo tombontsoa amin'ny fampiasam-bola amin'ny fanombohana. Ny SeedInvest dia nanangom-bola tamin'ny fanombohana 150 ary manamora ny tambajotra haingana amin'ny mpampiasa 200,000. Ny SeedInvest dia efa nihoatra ny fanombohana 25,000 dia mihatra amin'ny fampiakarana ny renivohitra nanomboka tamin'ny famoronana ary dia nanaiky ny 1% amin'ireo orinasa ireo izay hizara amin'ny sehatra.
Noho ny fizotry ny Lalàna ao amin'ny JOBS (Jumpstart Our Business Startups) ao amin'ny 2012, dia afaka mampiditra orinasa any amin'ny orinasa tsy miankina ireo mpampanofa nahazoan-karama sy tsy nahazoan-dalana. Ny SeedInvest dia manome izany amin'ny fampiharana ary ny orinasa, izay efa nitombo nandritra ny fotoana fohy, dia mandray ny fampiasam-bola ivelan'ny sehatra.
axle ai dia namidy ny vahaolana amin'ny finday sy ny fitantanana ny rindrambaiko amin'ny orinasa 500 manerana izao tontolo izao, avy amin'ny fampahalalam-baovao toy ny Turner, CBS sy Paramount, ho an'ny orinasa maro toy ny REI, Reebok, Coca-Cola ary Price Waterhouse Coopers. Ny rindrambaiko, izay mampitombo ny fandrosoana farany amin'ny fanabeazana kanto sy ny fianarana fiara, dia ahafahan'ireo mpanjifany manamarika, mitady, mitantana ary miara-miasa amin'ny haino aman-jery amin'ny fomba izay sarotra be loatra na tsy misy vidiny loatra. Raha ny votoaty mifototra amin'ny lahatsary dia manohy ny tanjony manerantany ho toy ny fitaovana fampitaovana ilaina, ny vahaolana rindrambaikan'ny axle ai dia manome mpamorona votoatin'ny fitaovana maivana sy mora ampiasaina mba hanampy amin'ny fitantanana ny lahatsoratr'izy ireo.
Hoy Sa Sam Bogoch, sefo CEO, "Ai dia mihamitombo haingana hatramin'ny nananganana anay noho ny fananganana adihevitra manerantany ny vahaolana rindrambaiko tsotra izao mba hitadiavana sy hitantanana ny votoatin'ny lahatsary." Tohiny Bogoch, "Nahita an'i SeedInvest izahay ho lasa mpiara-miombona antoka amin'ny famatsiam-bola ary faly miarahaba ireo mpampiasa vola mba ho anisan'ny orinasa mitombo. "
Senior Editor at Fampitana Beat Magazine
Curtis Chan dia ny Filoha sy ny CEO / Mpanorina sy Tale Partner ny teknolojia avo roa Brand Marketing Public Relations sy orinasa, CHAN & mpiara-miasa sy ny fandroson'ny ara-pahalalana Fiantraikany, izay miainga avy amin'ny mpanjifa Global Fortune 500 mba sahy vatsian'ny startups renivohitra.
Ny sampan-draharaha 'asa, nandritra ny roapolo taona, no namonjy tsompitra dingana voalohany sy manan-danja marika orinasa fitomboana hatsiaka, na izay niafara tamin'ny fahazoana na IPO, miaraka amin'ny tanteraka ny tombany ny $ 2.0 Billion.
Mr. Chan dia serial mpandraharaha, soa nataon'ny, mpanoratra sy ny anjely mpampiasa vola. Nilalao tany am-boalohany andraikitra manan-danja mpanatanteraka eo amin'ny fanampiana ny hampiditra ao amin'ny nomerika na feo sy lahatsary nomerika teknolojia ho an'ny ny fandraisam-peo, fampitana ary mamoaka ny vokatra orinasa. Ny fototra velabelarina be sakan'ny telopolo taona mahery tao mandrakizay mitombo mpanatanteraka anjara amin'ny asa, ny fampandrosoana raharaham-barotra, injeniera sy ny varotra / barotra ao amin'ny teknolojia vaovao, haino aman-jery sy ny fialam-boly, fitehirizana sy ny tambajotra, ary ny hafa mifandray teknolojia avo orinasa. Izy no mpanoro hevitra sy mavitrika ambony mpanolotsaina maro naorina, ary hanomboka-ny orinasa, ny tsena / mpandalina ny teknolojia, ary manana ny roapolo taona ny traikefa eo amin'ny marika fampandrosoana, fitantanana Consulting / orinasa turnarounds, famoronana dokam-barotra sy ny fifandraisana.
Ny nahazoany diplaoman'ny Oniversité Polytechnique Kalifornia any California, San Luis Obispo, Andriamatoa Chan dia mankalaza ny taonany 12 taona ho mpikambana ao amin'ny Komitin'ny Fullerton College Foundation, taona 16 taona ho Entrepreneur-in-Residence ary mpanolotsaina ho an'ny Ivontoerana Small Business any amin'ny Oniversiten'i California State Fullerton sy ny mpikorisa. Ankoatra izany, mpikambana mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny DECA (Delta Epsilon Chi sy Clubs Club of Distributive America) izy; mpanolotsaina iray ao amin'ny Global Waste Research Institute ao amin'ny College of Engineering, mpanolontsaina mpampianatra, Cal Poly, San Luis Obispo ary mpikambana ao amin'ny Fikambanana Green & Gold an'ny Filoha. Mafana fo momba ny fitsaboana hospice, izy no filohan'ny Biraom-piangonana taloha ho an'ny Fikambanana Fanasitranam-poana; ary mpilatsaka an-tsitrapo tsy tapaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny MBA sy ny Doctorate manerana ny firenena. Nanolotra sy namoaka lahatsoratra momba ny 30 ireo tetikasa manerantany izy, dia mpiara-mamorona boky iray, mpikambana iray ao amin'ny biraon'ny famoahana ho an'ny Society of Motion Picture and Television Engineers, Senior Editor for Broadcast Beat Magazine, tonian-dahatsoratry ny Senior Technology for Review Technology, ary matetika dia nanolotra Tonian'ny Contributing ho an'ny gazety amerikana sy iraisam-pirenena momba ny varotra nandritra ny taona 30.
Hijery ny fandroson'ny ara-pahalalana Impact tolotra amin'ny www.cognitiveimpact.com. Curtis dia mety ho azo amin'ny curtis@cognitiveimpact.com; Office: (714) 447-4993 na curtis@broadcastbeat.com.
Posts by Curtis farany Chan (jereo rehetra)
The Lightpower Collection to Showcase Rock ‘n’ Roll’s Defining Moments from Legendary Photographer Neal Preston at The 2019 NAMM Show - Desambra 31, 2018
Roland Expands Video Products Team withChris Wissinger - Desambra 31, 2018
AES@NAMM Pro Sound Symposium: Live & Studio 2019 Covers the Spectrum with Entertainment Wireless and In-Ear Monitoring Academies - Desambra 31, 2018
Previous: Red Cinema Digital ho an'ny resadresaka amin'ny mpilalao sarimihetsika Sandra Valde-Hansen Ao amin'ny 2018 Camerimage
Next: GARRETT BROWN NANDRESY NY FAMPANDROSOANA NY KARAMA AMIN'I JAPON
Archives Select Month Janoary 2019 (190) Desambra 2018 (243) Novambra 2018 (406) Oktobra 2018 (496) Septambra 2018 (495) Aogositra 2018 (397) Jolay 2018 (876) Jona 2018 (869) May 2018 (871) Aprily 2018 (831) March 2018 (779) Febroary 2018 (684) Janoary 2018 (605) Desambra 2017 (396) Novambra 2017 (712) Oktobra 2017 (835) Septambra 2017 (608) Aogositra 2017 (583) Jolay 2017 (710) Jona 2017 (543) May 2017 (621) Aprily 2017 (695) March 2017 (704) Febroary 2017 (340) Janoary 2017 (364) Desambra 2016 (606) Novambra 2016 (344) Oktobra 2016 (556) Septambra 2016 (622) Aogositra 2016 (1056) Jolay 2016 (532) Jona 2016 (414) May 2016 (505) Aprily 2016 (713) March 2016 (743) Febroary 2016 (382) Janoary 2016 (123) Desambra 2015 (357) Novambra 2015 (327) Oktobra 2015 (152) Septambra 2015 (259) Aogositra 2015 (440) Jolay 2015 (276) Jona 2015 (140) May 2015 (128) Aprily 2015 (435) March 2015 (289) Febroary 2015 (298) Janoary 2015 (131) Desambra 2014 (103) Novambra 2014 (194) Oktobra 2014 (149) Septambra 2014 (381) Aogositra 2014 (250) Jolay 2014 (287) Jona 2014 (363) May 2014 (231) Aprily 2014 (744) March 2014 (560) Febroary 2014 (427) Janoary 2014 (289) Desambra 2013 (137) Novambra 2013 (545) Oktobra 2013 (290) Jolay 2013 (26) May 2013 (13) Aprily 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
YouTube Video Editor / Producer